() in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
इक्राबाट उन्नति सहकार्य लघुवित्तले पायो यस्तो रेटिङ
काठमाण्डौ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई (इक्राएनपी–आईआर) बीबी माइनस निष्कासनकर्ता रेटिङ प्रदान गरेको छ। उक्त रेटिङ प्राप्त गर्ने निकायहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न चुक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेका मानिन्छन्। उक्त रेटिङ निष्कासनकर्ताको सामान्य क्रेडिट विश्वसनीयतासम्बन्धी...
नबिलद्वारा एनबी बैंकलाई गाभ्न राष्ट्रबैंकको सैद्धान्तिक सहमति, मुख्य सूचकमा अग्रणी बन्दै
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) गाभ्न आइतबार सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभ्नका लागि गत पुस २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । एनबी बैंकको एक्विजिसन पश्चात् नबिल बैंक चुक्तापुँजी, कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालन, खुद मुनाफा तथा अन्य वित्तीय सूचकहरुमा...
राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कर्मचारीले नेपाल बैंकबाट बिनाधितो रु. १५ लाखसम्म ऋण पाउने
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबीच राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कर्मचारीहरुलाई बिनाधितो रु. १५ लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सिफारिसको आधारमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिना धितो सुलभ व्याजदरमा सेवाग्राही कर्जा...
गरिमा स्मार्टबाट आईबिएफटि गर्दा हरेक दिन रु ५०० जित्ने मौका !
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकले आउँदै गरेको तिहारलाई लक्षित गरी डिजिटल बैकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्न ‘ट्रान्सफरमा छ फाईदा ट्रिपल’ नामक अभियान लिएर आएको छ । फोनपेले ल्याएको आईबिएफटि केन्द्रित ‘झट्ट ट्रान्सफर चट्ट कार २.०’सँग प्रेरित रही डिजिटल बैकिङ्गलाई प्रोत्साहन तथा प्रबद्र्धन गर्न गरिमा विकास बैंकले यो अभियान लिएर आएको हो...
काठमाण्डौ । असोजमा बैंकहरुले कर्जा बिस्तारलाई आक्रामक गतिमा अगाडि बढाएका छन् । सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने बैंकले समेत राष्ट्रबैंकबाट सापटी ल्याएर समेत कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिंदा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी देखिएको हो । बैंकहरुले असोजमा ९७.६५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् भने १२६.२२ अर्ब बढी कर्जा परिचालन...
काठमाण्डौ । पुँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै लगानीकर्ताहरुले आज नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अगाडि धर्ना दिएका छन्। पुँजीबजार सुधारका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउनसँगै वार्तामा बस्न दिउँसो ३ बजे पुगेका सेयरधनीहरुलाई भित्र छिर्न नदिएपछि सेबोन अगाडि धर्ना दिएका हुन्। धर्नामा बसेका लगानीकर्ताहरु सेबोनका निमित्त प्रमुख निरज...
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत (९.५ प्रतिशत व्याजदरमा ०.५ प्रतिशत थप प्रिमियम सहित) ब्याजदरसहितको आकर्षक स्किम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ३ महिना र त्यसभन्दा बढी अवधिका व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा सर्वाधिक १० प्रतिशत ब्याजदरको अफर सार्वजनिक गरेको हो । दशैं जस्तो महान पर्वको...
काठमाण्डौ । मुद्दति निक्षेपमा एकाएक १० प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याजदर प्रकाशित गरेको सनराइज बैंकलाई पछ्याउँदै अन्य ४ बैंकले पनि उच्च दर प्रकाशन गरेका छन् । सनराइजको पद्चाप पछ्याउने बैंकहरुमा बैंकरका नेतादेखि प्रणालीको ठूलो बैंकसम्म परेको छ । वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)का अध्यक्ष भूवन...
गरिमा बैंकका ग्राहकलाई ‘द एभरेष्ट होटल’मा १५% सम्म छुट
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा अवस्थित ५ तारे होटल ‘द एभरेष्ट होटल’सँग होटलले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा सुविधामा आर्कषक छुटका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताअनुसार गरिमा विकास बैंकका डेविट कार्ड र गरिमा स्मार्ट प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकले ‘द एभरेष्ट होटल’बाट फुड एण्ड...
तेह्रथुम पावरको रु. ८ करोडको आईपीओमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको रु. ८ करोडको आईपीओमा आज भदौ ९ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ८ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो। यो आईपीओमा भदौ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यो अवधिसम्ममा पनि सबै कित्ता बिक्री नभए ढिलोमा भदौ २३ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिन सक्नेछ। कुल ८ लाख कित्तामध्ये १६...
यस्तो छ ङादी ग्रुप पावरको प्राविधिक पक्ष, आगामी दिनमा के होला सेयरभाउ ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । यो साताको सेयर बजारलाई समीक्षा गर्नुपर्दा साप्ताहिक रुपमा जम्मा ४ दिन कारोबार भयो। यी कारोबारमा ४०.४७ अर्बको कारोबार भयो भने नेप्से परिसूचकमा २४.३३ अंकको बढोत्तरी भएको छ। दैनिक औसत कारोबार १० अर्बभन्दा बढी भएकोले सेयर बजार कारोबार तथा भोलुम दुवैतर्फबाट बुलिस नै रहेको देखिन्छ। यो साता पनि बजारमा...
काठमाण्डौ । निषेधाज्ञाका कारण कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप बढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका नायब प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार गत शुक्रबार (जेठ ७ गते) सम्म बैंकिङ प्रणालीमा ६२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि जेठ ५ गतेसम्म ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकिङ...
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जरसम्बन्धी सम्झौता अझै लम्बिने देखिएको छ। दुवै बैंकबीच लगभग बराबरी सेयर स्वाप अनुपातमा मर्जरमा जाने सहमति भइसक्दा पनि मर्जरसम्बन्धी सम्झौतापत्र हस्ताक्षर (एमओयू) को समय भने लम्बिँदै गएको हो। पाकिस्तानको हबिब बैंकको हिमालयन बैंकमा रहेको सेयरका...
काठमाण्डौ । हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडबीचको मर्जर प्रक्रियालाई मंगलबारसम्ममा औपचारिक सहमति गर्ने तयारी भएको छ। दुवै बैंकबीच बराबरी सेयर स्वाप अनुपातमा जाने सहमति भइसकेको हो। यसअघि टीआर उपाध्याय अकाउन्टिङ फर्मले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मूल्यांकन गर्दा हिमालयन बैंकको १०२.५० पैसा सेयर स्वाप...